トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Yini ngokuvamile e Horukon iqembu ukucushwa wamakhaza pachinko
Ukulungiselelwa iqembu, kuphendulwa isignali jackpot kusuka ukucushwa Hall seqembu ngalinye kuyoba lowo welula jackpot. Leli Su kwehholo conserver bamba, yilokhu bekulokhu Dasa wacabanga. Lapha, i-conserver ihholo ulibuka bamba, sifuna ukwethula lokho njengoba iphethini ezivamile ekucushweni iqembu ezaziwayo.
Ukulungiselelwa kweqembu ukuthunjwa ihholo conserver, inombolo ekupheleni ukumisa, ohlangothini-by-side ukumisa, kuthiwa kukhona izinhlobo ezintathu ukumisa okungajwayelekile. Phakathi kwabo, ukucushwa kuthiwa kuzwelonke esikhulu kakhulu, ohlangothini-by-side ukumisa kanye iye ngamagama ahlukahlukene anjengokuthi ukucushwa ukuphela, kodwa akazi ukuthi nguye ngokomthetho ezimweni eziningi.
wukuthi lokhu kucushwa yisona esikhulunywa abantu abaningi, ohlangothini-by-side ukumisa nakho ukucushwa ekupheleni futhi, kubonakala sengathi into kulula ukuqinisekisa ngoba isizathu ukuthi kulula nge liyabonakala. Ngoba alikho yokuthi isiqinisekiso egumbini pachinko zingafundwa, sekuwumkhuba yokuthi kungaba ngakho kokuqagela.
esimweni ukucushwa ekupheleni, ekupheleni etafuleni lapho uxhumeke ngenombolo transformer iyingxenyekazi elifanayo kuyoba neqembu elilodwa. 1 qembu kubonakala engaba mihlanu cishe. Ngokwesibonelo, e amayunithi siqhingi 20, kuyoba yokuthi amaqembu amahlanu kukhona kulesi siqhingi.
waleli qembu, ngoba iye kwenziwe yonke pachinko emakhazeni kuyoba isikhalazo ku bamba ihholo conserver. Ingabe ukuthi kuyoba futhi avame, ukucushwa ohlangothini-by-side, ohlangothini-by-side, isibe amaqembu emine kuya kwemihlanu, lapho kokuwina iLotto nangempela ngayibamba, yokuthi jackpot therein isakazwa ngeke uzisole.
Nokho, eminyakeni yamuva nje, kuthiwa kukhona emakhazeni pachinko we kuhlangana ukucushwa ekupheleni futhi ukucushwa ohlangothini-by-side. Uma ukucushwa ohlangothini-by-side futhi ukucushwa ekupheleni axutshwa, ukuze ube ezahlukene by siqhingi, sithola kuthiwa kuba nzima kancane kakhudlwana. Phakathi
pachinko eshintsha, futhi isiqhingi ohlangothini-by-side ukumisa, kusukela esiqhingini ekupheleni ukucupha axutshwa, kuthiwa ukuthatha isikhathi sokucwaninga lapho livelile jackpot. Leli qembu -Loop phiko ngempela kungakhathaliseki onobuhle enjalo, bese ukuba ziye ebiyelwe kuphela ume inombolo, into mina ukuthi jackpot ivela kaningi phakathi kweqembu elifanayo.
Kodwa muva nje, ziningi pachinko eshintsha ukuthi sezisungule omunye transformer komunye ukuze kuvinjelwe enkingeni. Kule nto, ezazichazwa ukuba khona Ukubuthelela kwakuyodingeka ayisekho banamathele.
umqondo ukumisa iqembu, kucatshangwa ukuthi inombolo phansi jackpot asikho isizathu e kwenzeka nje ukuba ndawonye. Ngo esitolo pachinko ukuya nawe, noma ngabe ukucushwa iqembu okukhulunywa kulo bamba ihholo conserver Kumiswa, kungase kube mnandi ukuba sibheke esisodwa.